UMika Waltari kunye noSinuhé wase-Egypt. Ukuphononongwa komsebenzi wombhali waseFinland. | Uncwadi lwangoku
Umbhali waseFinland UMika Waltari wasweleka eHelsinki ngo-Agasti 26, 1979. Ungomnye wababhali abadumileyo kwilizwe liphela. Uyaziwa ngencwadi zakhe zembali kwaye wayengumlobi obalaseleyo. Isihloko sayo esaziwa kakhulu ngu USinuhé, umYiputa. Namhlanje kwinkumbulo yakhe, ndiwukhumbula umsebenzi wakhe.
1 UMika Waltari
2 USinuhé umYiputa
2.1 Iziqwenga zenoveli
2.1.3 Ezinye iziqwengana
UMika Toimi Waltari wazalelwa e Helsinki kwaye wayengomnye wababhali abadumileyo baseFinland. Uyaziwa ngaphezu kwazo zonke iimbali zakhe zembali. Funda Theology kunye nefilosofi kwaye wasebenza njengentatheli kunye nomgxeki wokubhala kumaphephandaba ahlukeneyo aseFinland kunye neemagazini Kwakunjalo ilungu leFinland Academy. Ubhale ubuncinci Iinoveli ezingama-29, iingqokelela zemibongo ezi-6 kunye nemidlalo engama-26 kunye nerediyo kunye nezikripthi zeefilimu, iinguqulelo, kunye namakhulu ophononongo kunye namanqaku.
Incwadana yakhe eyaziwayo kakhulu USinuhé, umYiputa, yapapashwa ngo-1945. Kodwa zazininzi ezinye ezazifana Kuriton Sukupolvi, I-Akhamaton, UMiguel, umkreqi, Ingelosi emnyama, Ukungqingwa kweConstantinople, Umdlalo oyingozi, UKumkanikazi usuku, Umntu ongaziwayo weza efama, ukumkanikazi webhola yasebukhosini, Ukusuka kubazali ukuya ebantwaneni, UMarcus waseRoma, Iiholide zeCarnac, Intombazana egama linguOsmi. Imisebenzi yakhe iguqulelwe kwiilwimi ezingaphezu kwama-30.
Kwakungu leyokuqala kwaye iphumelele kakhulu Iinoveli zembali zalo mbhali. Oku ebekwe kwi-Egypt Yamandulo, ngexesha lolawulo lukaFaro Akhenaten. Umlinganiswa ophambili ngu Sinuhé, ugqirha wakho wasebukhosini, oxelela ibali lakhe kwi elubhacweni emva kokufa kwale pharao. Yintoni egqithisile, ilahlekelwe sisikhundla sayo ngenxa yobudlelwane bakhe obusileleyo nenkundla. Kwakhona ulahlekelwe nendlu yabazali bakhe nelifa lakhe lonke. Ngaphandle kweziganeko ezenzeka eYiphutha, inoveli ikwabalisa nge Uhambo ukusuka eSinuhé ngo Babilonia, IKrete nakwezinye iidolophu.
Mna, uSinuhé, unyana kaSenmut kunye nenkosikazi yakhe uKipa, ndibhale le ncwadi. Ukungaculi iindumiso zoothixo belizwe laseKemi, kuba ndidiniwe ngoothixo. Hayi ukudumisa oofaro, kuba ndidiniwe zizenzo zabo. Ndizibhalela. Ukungabancomi oothixo, hayi ukubancoma ookumkani, hayi ngenxa yokoyika ukuza okanye kwithemba. Kuba ngexesha lobomi bam ndive ubunzima bezilingo kunye nelahleko kangangokuba uloyiko olungamampunge alunokundingcungcuthekisa kwaye ndidiniwe lithemba lokungafi njengokuba ndinjalo koothixo nookumkani. Kungenxa yoko, yeyam kuphela endiyibhalayo, kwaye kweli nqanaba ndiyakholelwa ukuba ndiyazihlula kubo bonke ababhali bexesha elidlulileyo okanye elizayo.
Ngenxa yokuba mna, Sinuhé, ndiyindoda kwaye ngenxa yoko ndihleli kubo bonke ababekho ngaphambi kwam kwaye ndiza kuhlala kubo bonke abasemva kwam. Ndiya kuhlala ekuhlekeni nasezinyembezini zabantu, kwiintlungu zabo, nakukoyika kwabo, ngokulunga kwabo, nangobubi babo, kubuthathaka babo namandla abo. Njengendoda, ndiza kuphila ngonaphakade emntwini kwaye ngenxa yesi sizathu andidingi minikelo engcwabeni lam okanye ukungafi kwegama lam. Oku kubhalwe nguSinuhé, umYiputa, owayehlala yedwa yonke imihla yobomi bakhe.
Inyaniso yimela ebukhali, inyani sisilonda esinganyangekiyo, inyani iyasila iasidi. Ngesi sizathu, ngexesha leentsuku zobutsha bakhe kunye namandla akhe, umntu ubalekela enyanisweni esiya ezindlwini zolonwabo kwaye emfanyekiswe ngumsebenzi kunye nomsebenzi onomkhuhlane, ngokuhamba nokuzonwabisa, ngamandla kunye nentshabalalo. Kodwa uyeza umhla apho inyani limhlaba njengomkhonto kwaye engasaziva uvuyo lokucinga okanye ukusebenza ngezandla zakhe, kodwa azibone eyedwa, phakathi kwabanye abantu, kwaye izithixo azizisi kuncedo kuye ubulolo.
Ndibhala kuba iwayini iyakrakra enkalakahleni. Ndibhala kuba ndiphulukene nomnqweno wokuzonwabisa nabasetyhini, kwaye akukho gadi okanye ichibi leentlanzi elibangela ukuba amehlo am avuye. Ngexesha lobusuku obubandayo basebusika, intombazana emnyama ifudumeza ibhedi yam, kodwa andiyonwabisi. Ndizilahlile iimvumi, isandi semirhubhe nogwali sonakalisa iindlebe zam. Kungenxa yoko le nto ndibhalayo, Sinuhé, ukuba andazi ukuba ndenze ntoni ngobutyebi okanye iikomityi zegolide, imore, imony kunye neempondo zendlovu. Kuba ndinazo zonke ezi zinto kwaye khange ndihluthwe nto. Amakhoboka am asaboyika abasebenzi bam, kwaye oonogada bazithoba iintloko zabo kwaye babeke izandla zabo emadolweni xa ndidlula. Kodwa amanyathelo am anqunyelwe kwaye inqanawa ayinakuze ikhwele kwindawo yokuhla.
De 1954, Yayivelisa UDarryl F. Zanuck ye20th Century Fox kwaye wayalathisa UMichael Curtiz, umlawuli odumileyo URobin wehlathi o Casablanca. Phakathi kweetoliki zayo kukho U-Edmund Purdom, uJean Simmons, uGene Tierney, uVictor ovuthiweyo, uMichael Wilding, uJohn Carradine okanye uPeter Ustinov. Ayiphumelelanga kwimpumelelo elindelweyo, kodwa yonyulelwa i-Oscar yokufota okungcono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » uMika Waltari kunye noSinuhé wakhe umYiputa. Uphononongo lomsebenzi wombhali waseFinland.